Qoyska & Horumarinta Bulshada | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category Qoyska & Horumarinta Bulshada
Muuse, waxa uu ahaa wiil madi ah. Baaddiye ayaa uu ku dhashay oo uu ku garaadsaday. Xilligii kuraynimada ayaa aabbihi uga dhintay kadimo ishkin ah iyo tirooyin ari ah. In kasta oo uu barwaaqo darduuranayey, haddana, ma uusan jeclayn in uu ku sii nagaado baddiyaha. Waxa uu ka doorbidayey magaalada. Laba arrimood ba waa u danaynayey magaalada: In uu wax ka barto iyo in uu ku naalloodo nolol ka macaan tan miyaga. Muddo uu isweydiinayey tabtii uu uga daldoorsan lahaa duurka ka dib, habeen habeennada ka mid ah, ayaa waxa uu go`aan ku qaatay: In uu …
Qof kasta oo aad ehel tihiin, qof kasta oo aad lammaane tihiin, qof kasta oo aad saaxiib dhaw tihiin, qof kasta aad isla shaqeysaan iyo qof kasta oo aad si uun isugu dhawaataan, ma ahan sida aad ka wada filanayso. Mar walba waxaa jiraya waxyaalo kaa qarsoon ama wejiyo kale oo aadan ogayn oo uu qofkaasu yeelan karo. Waxaa laga yaabaa in uu si kuula socdo, si kalana uu kaaga socdo. Dadku, inta badan ma ogaadaan wejiyada iyo siraha dadka ay isku dhaw yihiin in ay dabagal ay ku sameeyaan mooyaane, taas oo iyana, walwalkeeda, walbahaarkeeda iyo wadnago`eeda leh. Dhawr …
Islamarkii ey indhahaagu qabtaan qof xiran dhar aad uqurux badan hadane qaali ah maxaad ka’aamineysaa? Sida ey bulshadu ubadantahay dharka waxa uu kamid yahay, waxa lagu qiimeeyo qofka, haddii aad qamiis iyo cimaamad xirato waxa aad qaadaneysaa magaca WADAAD. Haddii aad soo xirato taraaxad iyo saako waxa aad qaadaneysaa magaca CIYAALKA XAAFADDA Sidookalena marki aad xirato dharka Suudka ah ee suuqa qaaliga ka’ah waxa aad qaadaneysaa magaca MAAL QABEEN!! BALSE MAXAA KU DHACAY GABADHII MAAL QABEENKA U MOODDAY NINKII SUUDKA XIRNAA? Waxa ey ahayd subax hore; waxa aan ku kulannay dhaqtarka/ cisbitaalka, dhammaanteen waxa aan u nimid si’aan u lakulanno …
Habeenkii ay baratay, balo ayey doonatay. Waxa ay lugaheeda ku raadsatay cudur halis ah. Waa kii ay la jiiftay sagaal bilood. Muddadaas cunto saani uga ma degin, markaas bay weyd noqotay oo meelihii hilibku buuxin jiree oo dhan inta isku dhaceen, lafihii soo muuqdeen. Waa walbahaarka hayey e, kasho waa u weyday is-haagin iyo iska shaqeyn, markaas baa timaheedii dahabiga ahaa raso noqdeen, jirkeedii subbagga ahaana inta qallalay oo jacdaday, hollob fuushay. Ilkaheedii baylka ahaa luun baa maray, luqluq iyo rummay la`aan bayna sababsadeen. Indhaheedii cadcaddaa waxa ay isku beddeleen guduud god dheer ka soo muuqda, soojeed iyo dhafar ayeyna …
Codka Maryam waxa laga dareemi karay xanuun markii ay ka waramaysay qaabkii uu ninkeeda u wareeray iyadoo ku sugan dad badan dhaxdooda. “Falcelinta dadka ayaa ahayd in ay caadi tahay in haweeney uu ninkeeda garaaco. Ma jiro sharci, ma jiro guri amaan ah, xita booliska wax sidaas u sii buuran ma sameyn karaan. Qoysaska qaar way qariyaan oo waxay yirahdaan waa arrin anaga noo gaar ah. Way adagtay in sheekadeeda camal laga maqlo dalkii ay u dhalatay ee Iran, balse tan iyo markii la hagaajiyay barnaamijka casriga ah ee codadka lagu baahiyo, waxaa soo ifbaxay haween badan oo iyada la …
Yaxye Maxamed Abubakar, August 7, 2020
“Alla hayow Waxaan ku weydiisanayaa galabkaan codsi qaas ah, waxeyna tahay in aad iga dhigto ”mobile,, Maalin maalmaha ka mid ah, macalimad ayaa gashay fasal, waxeyna salaantay ardadeedii, ka dib waxay waydiisay si qadarin iyo xiiseyn ah inay u soo qoraan mowduuc ay ku weydiisanayaan Eebbe inuu siiyo wax ka badan waxa ay jecel yihiin oo rajeynayaan inay gaaraan adduunkaan dushiisa… Kadib markii daraasada maalinkaa dhamaatay, ardaduna ay guryahoodii u rawaxeen, mid walbaa wuu fadhiistey isagoo ka fikiraya hammigiisa, qaar waxay rajeeyeen ciyaar cusub, qaarne waxay rajeeyeen guul, qaar kalane waxay rajeeyeen dib u heshiinta wixi dhexmaray ayaga iyo walaalahood, …